အသံအပေါ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကဘယ်လို - အရင်ကဆိုရင်များအတွက် - 2019
သငျသညျသီချင်းဆိုသို့မဟုတ်သီချင်းအချို့ကိုမျိုးကိုကြိုက်နေလျှင်, သင်မူကားဖွဲ့စည်းမှုသည်အဘယ်အရာမသိရပါဘူး, သူက၎င်း၏ရေးသားသူဖြစ်ပါသည်, အသံအပေါ်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့အများကြီးအခွင့်အလမ်းများကြောင့်ဆာသို့မဟုတ်တစ်ခုခုရဲ့ရှိမရှိနေပါစေနှင့်အတူယခုရှိပါတယ်, (သင်အားဖြင့်ကွပ်မျက်ခံရပင်လျှင်) တစ်ဦးအသံ၏အဓိကအားပါဝင်သည်ဟု။
အဆိုပါနောက်ဆက်တွဲ၏ Windows 10 ကို (8.1) နှင့်တကွ, အွန်လိုင်း, Window 10, 8 များအတွက်အခမဲ့ပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြု.7သို့မဟုတ်ပင် XP ကို ​​(ဆိုလိုသည်မှာ desktop ပေါ်က) ​​နှင့် Mac OS X: ဤဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းတွေနဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့မည်ကဲ့သို့ဆွေးနွေးကြမည် အဖြစ်ဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် applications များနှင့်အတူ - အန်းဒရွိုက်, iPhone နဲ့ iPad ပေါ်မှာဂီတ၏ဖော်ထုတ်ခြင်းများအတွက်မိုဘိုင်းအတွက်နည်းလမ်းတွေနဲ့ဗီဒီယိုညွှန်ကြားချက်ဒီလမ်းညွှန်ရဲ့အဆုံးမှာရှိပါတယ် ...
Yandex Alisa နှင့်အတူသီချင်းတစ်ပုဒ်, ဒါမှမဟုတ်ဂီတ၏အသံသင်ယူဖို့ကိုဘယ်လို
ရှည်လျားလွန်ခဲ့တဲ့ iPhone, iPad က Android နှင့် Windows အတွက်အခမဲ့စကားသံကိုလက်ထောက် Yandex Alisa ရရှိနိုင်ပါသည်ထင်ရှားမဟုတ်ဒါကြောင့်အခြားအမှုအရာတို့တွင်အသီချင်းတစ်ပုဒ်၏အသံဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်း၏အသံသည်အားဖြင့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်သမျှသော - အဲလစ်မှသက်ဆိုင်ရာမေးခွန်းမေးစရာနှင့် (ဥပမာ:? ကစားအဘယျသီခငျြး), ကိုနားထောင်နှင့်ရလဒ်ရအောက်ပါပုံရိပ် (လက်ဝဲ - လက်ျာအပေါ်အားလုံးကို Android - iPhone ကို) ၌ရှိသကဲ့သို့ရန်သူကပေးပါ။ ငါ၏အစမ်းသပ်မှုများတွင်အဲလစ်အတွက်ဂီတဖွဲ့စည်းမှု၏အဓိပ္ပါယ်အမြဲတမ်းပထမဦးဆုံးအကြိမ်အလုပ်မလုပ်ဘူး, ဒါပေမယ့်သူကအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
(ဖွင့်လေ့လာသင်ယူကြောင့်မျှော်လင့်ချက်ပါစေ) "ငါသေးဖို့ဘယ်လိုမသိသောကြောင့်," သင်သူမ၏ Windows ပေါ်မှာတူညီတဲ့မေးခွန်းကိုမေးမြန်းဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှာကံမကောင်းစွာပဲအဆိုပါ function ကိုသာ, iOS နဲ့ Android ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်, အဲလစ်ပြန်ဖြေတယ်။ အဲလစ်သင်က App Store ကနေဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်နှင့် Google မှ Yandex ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Store က App ကို Play Download ။
ကမဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာဖွယ်ရှိသည်ကတည်းကဒီမှာနည်းလမ်းတစ်လောကလုံးဖြစ်လိမ့်မည်နှင့် (ဂီတအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်, ဒါမှမဟုတ်သာကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မိုဘိုင်းကိရိယာများပေါ်တွင်နည်းလမ်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) ကိရိယာများအမျိုးအစားအားလုံးကိုအပေါ်အလုပ်လုပ်မည်ဟုစာရင်းထဲတွင်ပထမဦးဆုံးကဲ့သို့ဖြစ်၏။
ကျွန်တော်တို့ဟာအွန်လိုင်းသီချင်းခွဲခြားသတ်မှတ်ဖို့ဘယ်လိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ် - ငါမဆိုအစီအစဉ်များကိုတပ်ဆင်တဲ့ကွန်ပျူတာသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်မှာခဲ့တာမလိုအပ်ပါဘူးတဲ့နည်းလမ်းနဲ့စတင်ပါလိမ့်မယ်။
န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးမရှိအချို့သောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, လူကြိုက်အများဆုံးထဲကတစ်ခုမကြာသေးမီကအလုပ်လုပ်ကိုင်တော့ဘူး။ သို့သျောလညျးနှစျခုကအခြားရွေးချယ်စရာရှိနေဆဲ - AudioTag.info နှင့်တိုးချဲ့အေ့ဟေဂီတ။
လက်ရှိအချိန်တွင်၏အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုနှင့်အဓိပ္ပါယ်ဂီတသံကို AudioTag.info နမူနာဖိုင်တွေနဲ့အတူသာအလုပ်လုပ်ပါတယ် (ကမိုက်ခရိုဖုန်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးကနေမှတ်တမ်းတင်ထားနိုင်သည်) ထိုသူတို့နှင့်အတူအဆိုပါဂီတအသိအမှတ်ပြုမှုကိုနောက်ဖြစ်လိမ့်မည်။
စာမျက်နှာ //audiotag.info/index.php?ru=1 ကိုသွားပါ
သင်၏ audio file ကို load (လွှတ်တင်ခြင်းကိုကလစ်နှိပ်ပါ, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာဖိုင်ကို select လုပ်ပြီး), သို့မဟုတ်အင်တာနက်ပေါ်ရှိဖိုင်တစ်ဖိုင်မှ link တစ်ခုပေး, ထို့နောက် (ကရိုးရှင်းတဲ့ဥပမာဖြေရှင်းနိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်) သင်စက်ရုပ်မစပ်ဆိုင်ကြောင်းကိုအတည်ပြုပါ။ မှတ်စု: သင်ဖိုင်ကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်မထားဘူးဆိုရင်, သင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာကနေသံကိုမှတ်တမ်းတင်နိုင်ပါတယ်။
ပုံ (သူတိုတောင်းတဲ့ကျမ်းပိုဒ်မှတင်သွင်းခံခဲ့ရလျှင်ငါ၏အ audiotag.info အတွက်စမ်းသပ်မှု (10-15 စက္ကန့်), လူကြိုက်များသီချင်းများ (မိုက်ခရိုဖုန်းတှငျမှတျတမျးတငျထား) ကိုအသိအမှတ်မပြုဘူး, လူကြိုက်များတဲ့သီချင်းမဟုတ်တော့ဖိုင်တွေ (30-50 စက္ကန့်) အပေါ်အသိအမှတ်ပြုမှုကောင်းစွာအလုပ်လုပ်တယ် ဝန်ဆောင်မှု) beta ကိုစမ်းသပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
Google က Chrome အတွက်အေ့ဟေ-Music ကိုတိုးချဲ့
ယင်း၏အသံသည်အတွက်သီချင်းပြုပြင်ခေါင်းစဉ်အဆုံးအဖြတ်နောက်ထပ်နည်းလမ်း - တရားဝင် Chrome ကို store မှာအခမဲ့သတ်မှတ်ထားနိုင်သည့် Google Chrome ကိုများအတွက်အေ့ဟေ Music ကိုတိုးချဲ့။ လိပ်စာဘားခလုတ်ကို၏ညာဘက်ဖို့ extension ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက်လက်ရှိကစားသီချင်းသိရှိနိုင်ဖို့ပုံပေါ်ပါတယ်။
extension စနစ်တကျအလုပ်လုပ်တယ်နှင့်နေအိမ်ရဲ့သီချင်းစာသားကိုမှန်မှန်ကန်ကန်, ဒါပေမယ့်မရသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကနေဂီတမဆိုမျိုး, ဒါပေမယ့်လက်ရှိဘရောက်ဇာကို tab ကိုကစားမှသာသီချင်း။ သို့သျောလညျးကိုတောင်ဒီနေရာလေးကိုနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ချလက်ချတာဝန်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ဂီတအသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်နောက်ထပ်အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှု, - //www.midomi.com/ (ထို browser မှာအလုပျလုပျဖို့ Flash ကိုလိုအပ်တယ်, ဆိုက်အမြဲမမှန်ပါဘူးတဲ့ plug ကို၏ရှေ့မှောက်တွင်ဆုံးဖြတ်သည်: ပုံမှန်အားဖြင့်ဖွင့် plug-in ကိုမှမပါဘဲ, အပါအဝင် flash ကိုကစားသမား Get ကိုကလစ်နှိပ်ပါ Download ပြုလုပ်) ။
, midomi.com မှတဆင့်အသံကနေအွန်လိုင်းသီချင်းတစ်ပုဒ်သင်ယူဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုသွားနှင့်စာမျက်နှာ၏ထိပ်မှာ "ကိုနှိပ်ပါနဲ့သီချင်းဆိုသို့မဟုတ် Hum" ပေါ်တွင်မောက်ကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ရန်အတွက်။ ရလဒ်အဖြစ်သင်ပထမဦးဆုံးမိုက်ခရိုဖုန်းသုံးစွဲဖို့တောင်းဆိုချက်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်နှငျ့သငျသီခငျြးကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသီခငျြးဆိုငျနိုငျ (ကကြိုးစားခဲ့ကြပြီမဟုတ်, ငါသီခငျြးဆိုမရနိုငျသညျ), ဒါမှမဟုတ်အသံအရင်းအမြစ်မှသင့်ကွန်ပျူတာကိုမိုက်ခရိုဖုန်းကိုဆောင် ခဲ့. , 10 စက္ကန့်စောင့်ဆိုင်းတစ်ကြိမ်ထပ်တူညီဖို့ကိုနှိပ်ပါ (Stop ဖို့ကိုနှိပ်ပါစာဖြင့်ရေးသားပါလိမ့်မည် ) နှင့်သတ်မှတ်ခဲ့ရာကြည့်ရှုပါ။
သို့သျောလညျးအဘယျသို့ငါပဲရေးထားပြီ - သိပ်အဆင်ပြေဘူး။ သင်သည်အဘယ်သို့ YouTube ကနေဂီတဖော်ထုတ်ရန်, ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ပါ, သို့မဟုတ်, ဥပမာအားဖြင့်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာရုပ်ရှင်ကနေသီချင်းဆိုသင်ယူဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်?
သင်တစ်ဦးကဤသည်၌ဖြစ်ပါသည်ပြဿနာမဟုတ်, တစ်မိုက်ခရိုဖုန်း၏အဓိပ္ပါယ်ရှိပါကအောက်ပါအတိုင်းအဖြစ်, သင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်သည်
Windows 7, 8, သို့မဟုတ် Windows 10 (ညာဘက်အောက်) ၏အသိပေးချက်ကိုဧရိယာထဲမှာစပီကာ icon ကို right-click နှိပ်ပြီး "ကိုမှတ်တမ်းတင်သည့်ကိရိယာများ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ထို့နောက်မှတ်တမ်းတင်ကိရိယာများ၏စာရင်းကိုတစ်ဦးအချည်းနှီးသောဧရိယာကို right-click ထောက်ပြီး context menu ကို select လုပ်ပါ "Show ကိုပြတ်တောက် devices များ။ "
ထိုကိရိယာများကြားတွင်ပါလျှင်စတီရီယိုရောနှော (စတီရီယို MIX) သက်သေပြ, လက်ျာ mouse ကိုခလုတ်နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ပုံမှန်အဖြစ်သတ်မှတ်ပါ" ။
အခုတော့အွန်လိုင်းသီချင်းဆိုပြဌာန်းခွင့်အတွက်, ဆိုက်မဆိုသံကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်ကစား "စကားကိုနားထောငျ" ပါလိမ့်မယ်။ တူ၏အသိအမှတ်ပြုမှုများအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်း: အသိအမှတ်ပြုမှု site ကိုစတင်ပါကသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ဖွင့်လှစ်, စောင့်ဆိုင်း, မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်သီချင်းခေါင်းစဉ်ကိုကြည့်ရှု (သင်စကားသံကိုဆက်သွယ်ရေးများအတွက်မိုက်ခရိုဖုန်းအသုံးပြုနေလျှင်, default အနေနဲ့မှတ်တမ်းတင် device ကိုပြုလုပ်ထားရန်မမေ့မလြော့ပါ) ။
Windows PC မှာသို့မဟုတ် Mac OS ပေါ်တွင်သီချင်းတွေကိုဆုံးဖြတ်ရန်အခမဲ့ပရိုဂရမ်
Update ကို (ကျဆုံးခြင်း 2017):ဒါဟာ Audiggle နှင့် Tunatic အစီအစဉ်ကိုအဖြစ်လုပ်ကိုင်ရန်စဲပုံ: ပထမဦးဆုံးမှတ်ပုံတင်ပို့ချပေမယ့်အလုပ်ဆာဗာပေါ်ဆဲကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်, ဒုတိယတစျခုဖွင့်ဆာဗာမချိတ်ဆက်ထားဘူး။
Audiggle - တနည်းကား, သင်အလွယ်တကူင်း၏အသံသည်အားဖြင့်ဂီတကိုသိရှိနိုင်ဖို့ခွင့်ပြုအများအပြားအစီအစဉ်များရှိနေကြသည်မဟုတ်, ငါသည်ကောင်းစွာ task ကိုမှတက်သည်နှင့်ကြောင့်အပိုအရာတစ်ခုခုကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ရန်ကြိုးစားပါဘူးအရာ, သူတို့ထဲကတဦးတည်းကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားအတော်လေးလူကြိုက်များရှိပါသည် - Tunatic လည်း Windows နဲ့ Mac OS အတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။
Audiggle အစီအစဉ်ကိုက Windows XP, Windows7နဲ့ 10 အဖြစ် Mac OS X အတွက်ဗားရှင်းအတွက်ပေးအပ်သည်အဘယ်မှာရှိတရားဝင်က်ဘ်ဆိုက် //www.audiggle.com/download ကနေ Download လုပ်ပါ
(- လက်ရှိတွင်သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်ရှိကစားသောအသံသည်သတ်မှတ်ချင်လျှင်ဒုတိယအချက်) မိုက်ခရိုဖုန်းသို့မဟုတ်စတီရီယိုရောနှော - ပထမပြီးနောက်အစီအစဉ်ကိုအသံအရင်းအမြစ်ကို select ရန်သင့်အားပြကိုစတင်ပါ။ အဲဒီ settings တွေကိုဘယ်အချိန်မဆိုသုံးစှဲမှာပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, အားလုံးလိုအပ်သောမုန်း၏မှတ်ပုံတင် (link ကို click နှိပ်ပြီး "ဟု New အသုံးပြုသူ ... "), အမှန်တရားကအရမ်းရိုးရှင်း - က e-mail ကို, user name နဲ့ password ကို - က program ရဲ့ Interface ကိုနှင့်သင်ရိုက်ထည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးအတွင်းရာအရပ်ကိုကြာပါသည်။
အနာဂတျမှာ, သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာကစားသောသီချင်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့လိုအပ်သည့်အခါမည်သည့်အချိန်တွင်မ, Youtube သို့မဟုတ်သင်ကြည့်ရှုနေတဲ့ရုပ်ရှင်အသံ, အပြတင်းပေါက်၌ button ကို "ရှာရန်" နှင့်အဆုံးကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ခဏစောင့်ဆိုင်းနှိပ် (သင်ကိုလည်းပေါ်မှာ right-click နိုင်ပါတယ် စနစ်ဗန်းကို Windows အတွက် program ကိုအိုင်ကွန်) ။
Audiggle အလုပ်လုပ်ရန်, သင်တန်း, သငျသညျအင်တာနက်လိုအပ်ပါတယ်။
ငါက Android ပေါ်မှာသီချင်းအသံကဘယ်လိုသိသလဲ
သငျသညျအမြားစုကက Android နဲ့ဖုန်းကိုရှိသည်, ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုအလွယ်တကူယင်း၏သံကိုအပေါ်ကစားခြင်းဘာသီချင်းခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ အားလုံးသင်လိုအပ် - အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုရရှိမှု။ တချို့ကပစ္စည်းတွေပဲအလုပ်လုပ်မှာ Android စားပွဲပေါ်မှာမှ add က widget ကစာရင်းထဲတွင်ရှိပါလျှင်လျှင်ကြည့်ဖို့ကိုကြည့် "ကစားခြင်းရဲ့အဘယျ" built-in Google ကအသံရှာဖွေမှုဝစ်ဂျက်ရှိသည်, သို့မဟုတ်။
"ဟုအဆိုပါဂိမ်းကို" မရရှိနိုင်သည့်ဝစ်ဂျက်ကို, သငျသညျမှာ google Play Store ကို (//play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.ears) မှ play များအတွက် utility ကိုအသံရှာဖွေရေးဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်ဆိုပါက install နှင့် add အသံရှာဖွေမှုပေါ်ထွန်း widget နှင့်သင်အောက်ပါပုံရိပ်၌ရှိသကဲ့သို့, ကစားခြင်းဘာသီချင်းထွက်ရှာချင်တဲ့အခါအသုံးပြုပါ။
Google ထံမှတရားဝင် features တွေအပြင်, ကစားခြင်းဘာသီချင်းထွက်ရှာနိုင်ရန်အတွက် Third-party applications များရှိပါသည်။ အကျော်ကြားဆုံးနဲ့ပေါ်ပြူလာ - Shazam, သင်အောက်ပါပုံရိပ်မှာတွေ့မြင်နိုင်သည့်၏အသုံးပြုမှုကို။
Play Store ရှိလျှောက်လွှာ၏တရားဝင်စာမျက်နှာပေါ်တွင်အခမဲ့ Shazam Download - //play.google.com/store/apps/details?id=com.shazam.android
ဒီလိုမျိုး၏ဒုတိယလူကြိုက်အများဆုံး applications များ - သီချင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်အဓိပ္ပါယ်အပြင်ပင်သီချင်းစာသားကိုထောက်ပံ့ပေးရာ SoundHound ။
SoundHound Play Store မှအခမဲ့အဖြစ်ဒေါင်းလုပ်လုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
iPhone နှင့် iPad ပေါ်တွင်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုအသိအမှတ်မပြုဖို့ကိုဘယ်လို
အထက်နှင့် SoundHound အခမဲ့ရရှိနိုင်သည့် Apple က App Store မှာလည်း Shazam လျှောက်လွှာဂီတကိုသိရှိနိုင်ဖို့ကလွယ်ကူစေပါသည်။ သင်တစ်ဦး iPhone, iPad ရှိပါကသို့သော်, သင်သည်မည်သည့် Third-party application များမလိုအပ်ပေမည်: င့် Siri ကိုတောင်းသောအရာကိုသီချင်းအများဆုံးဖွယ်ရှိ, ကစားနေသည် (အင်တာနက်ချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ), ကဆုံးဖြတ်ရန်နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Android နှင့် iPhone ပေါ်မှာသီချင်းတွေကိုနှင့်ဂီတအသံပြဌာန်းခွင့် - ဗွီဒီယို
ကံမကောင်းစွာပဲသူတို့၏အသံအဆုံးအဖြတ်အားဖြင့်သီချင်းတွေကို၏ desktop ကိုဗားရှင်းသိပ်မဟုတ်ပါဘူး: app ကိုစတိုးဆိုင်ကို Windows 10 (8.1) Shazam app ကိုမရရှိနိုင်ခဲ့ပေမယ့်ယခုထိုအရပ်မှဖယ်ရှားမီ။ အားလုံးလည်းရှိသောဖုန်းများနှင့် tablet များအတွက် Windows ကို 10 ARM အခြေခံပရိုဆက်ဆာနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည် SoundHound app ကိုနေဆဲဖြစ်သည်။
ရုတ်တရက် အကယ်. Cortana (ဥပမာ, အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား) အထောက်အပံ့က Windows 10 version တစ်ခုရှိသည်, သငျသညျသူမ၏မေးနိုငျ: "ဤသီချင်းကဘာလဲ?" - ကဂီတဖို့ "နားမထောငျ" ကိုစတင်ကစားဘာသီချင်းဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။